Fikirakirana ny fivezivezena any Sina ary hametrahana toerana fampidirana azo ampiharina amin'ny fanamboarana tokana sy ny orinasa | Weirui
1.Fanapahan-kevitry ny fikorianana mialoha ho an'ny fanodinana tsara ny tahan'ny mikoriana ao anatin'ny 250ml / h ho an'ny fifehezana tsara; 2.Ny sivana ranon-javatra fototra dia manana taham-sivana mihoatra ny 80% ho an'ny sombintsombin'ny 15um; ny mpanelanelana amin'ny sivana ranon-javatra karazana dia manana 5um, 3um ary 2um, izay ...
1.Fanapahan-kevitry ny fikorianana mialoha ho an'ny fanodinana tsara ny tahan'ny mikoriana ao anatin'ny 250ml / h ho an'ny fifehezana tsara;
2.Ny sivana ranomainty karazana fototra dia manana taham-sivana mihoatra ny 80% ho an'ny sombintsombin'ny 15um; ny mpanelanelana amin'ny sivana ranoka karazana marin-toetra dia manana famolavolana 5um, 3um ary 2um, izay ny tahan'ny fanivanana 5um, 3um , 2um ao anaty vahaolana misy ranoka. Ny tahan'ny fanivanana dia tsy latsaky ny 90% .Mety hanatsara ny fiarovana ny fampidiran-tsindrona anaty ary hampihena ny fahasimbana eo akaiky eo sy ny fahasimbana maharitra lava ateraky ny sombintsombin'ny vatan'olombelona.
3.Model: Karazana fototra: WRWS-01 (miaraka amin'ny Port-tsindrona Y), WRWS-02 (Miaraka amin'ny Port-tsindrona); Karazan-tsivana Precision: WRWJS-F01 （Miaraka amin'ny Port-tsindrona Y, Free DEHP）, WRWJS-F02 (Miaraka amin'ny Port-tsindrona , Maimaim-poana DEHP)
Teo aloha: azo atsofoka infusion
Kitapo fampidirana homamiadana
Fitaovana fametrahana napetraka
Fanjaitra hypodermic mipetraka
Tube Tube Endotracheal vita am-bava natao tamin'ny vava